Kenwood Toaster (TTP200) – White | Buy online | SHOP.COM.MM
Kenwood Toaster (TTP200) – White
Size: 16.5H x 22W x 15D cm
အရင်က ဒီအမျိုးအစားသုံးဘူးတယ် Read more Hide
အသုံးပြုရလွယ်ပြီး ပေါင်မုန့်ကင်တာလည်း မြန်တယ်။ တူးသွားတာမျိုးမရှိဘဲ ကြွတ်ကြွတ်ရွရွလေးနဲ့ စားကောင်းလို့ Kenwood ကိုတော်တော်အမှတ်ပေးမိတယ်။ Read more Hide
ပေါင်မုန့်ကင်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ်အဆင်ပြေတဲ့စက်လေးပါ။ ပေါင်မုန့်ကင်တဲ့speedလည်းအရမ်းမြန်လို့ အိပ်ရာထနောက်ကျလည်း မနက်စာတော့ လုံးဝမလွတ်ပါဘူး။ Read more Hide
အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ သုံးရတာလည်း လွယ်ကူတယ်။ ပစ္စည်းအရည်အသွေးလည်းကောင်းတယ်။ Read more Hide
The Kenwood TTP200 2-slice toaster isasimple and elegant design from our True collection. It features variable browning control, cancel, reheat and defrost settings as well asaremovable crumb tray. The Peek & View™ technology provides the option to check browning progress, without cancelling the cycle.
???????????????? (TTP200) – ?????????
Specifications of Toaster (TTP200) – White